Bitcoin - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ထိပ်တန်းအဖြူရောင်တံဆိပ် Cryptocurrency Exchange Platform
ဇူလိုင်လ 30, 2020 ဇူလိုင်လ 29, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
ဒီဂျစ်တယ်စနစ်နှင့်အမြတ်အစွန်းပြန်ရရှိရန်လိုအပ်မှုတို့ဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့် White-label Cryptocurrency လဲလှယ်သည့်ပလက်ဖောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင်အပူဆုံးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းဖြစ်လာသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြောင်းလဲလွယ်ခြင်းတို့ကြောင့်လဲလှယ်မှုအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးကွက်ထဲမှာသာလွန်ရပ်တည်ရန်ထူးခြားမှုလိုအပ်ချက်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့နှင့်လဲလှယ်ရာတွင်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိုင်ဆိုင်ရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေကြသည်။
Cryptocurrency Exchange Exchange Software နှင့်သူ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်ခြေလှမ်းများမှခြိမ်းခြောက်မှုများကိုပုံဖော်ပါ
ဇူလိုင်လ 22, 2020 ဇူလိုင်လ 21, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
Cryptocurrency အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်မြန်ဆန်မှု၊ ဖြန့်ဝေထားသော ledger နည်းပညာနှင့်ကျယ်ပြန့်သောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 7, 2020 ဇြန္လ 1, 2021 Mia Perla	2 မှတ်ချက်
cryptocurrencies နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားတယ်သူမဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မလွှဲမရှောင်သူတို့ကိုကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ဖို့လဲလှယ်လိုအပ်နေတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ cryptocurrencies သည်နှစ်များတစ်လျှောက်ကြီးမားသောဆွဲဆောင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးဒီဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲနေသောစီးပွားရေးခေတ်တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာပြီးထောင်နှင့်ချီသော crypto သုံးစွဲသူများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ်ထွက်လာလျက်ရှိသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ထောင်နှင့်ချီသောဖလှယ်မှုအသစ်များကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ crypto ဖလှယ်မှု၏အဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးမှာဗဟိုနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းလဲလှယ်ခြင်းများဖြစ်သည်။
White Label Cryptocurrency Exchange - ကူးစက်ရောဂါမှထွက်ပေါ်လာရန်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း!
ဇူလိုင်လ 4, 2020 မတ်လ 5, 2021 ဂျူလီမစ်	3 မှတ်ချက်
ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်တစ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟာငွေမရှိတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုက ၀ ယ်လိုအားနှင့်အသိအမြင်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် crypto စျေးကွက်သည်စျေးကွက်အရင်းအနှီးကိုဒေါ်လာ ၁၅၅ ဘီလီယံခန့်ရရှိခဲ့ပြီး Bitcoin သည်စျေးကွက်တန်ဖိုး ၆၃.၈% အထိတက်ခဲ့သည်။ crypto လဲလှယ်စျေးကွက်သည် crypto စျေးကွက်၏ ၀ င်ငွေ၏ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီး blockchain startups သည်ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလီယံခန့်ရရှိခဲ့သည်။ ဤကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း crypto market တစ်ခုတည်းကသာဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်နိုင်သည်။
ICO ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်များ
ဇူလိုင်လ 4, 2020 ဇူလိုင်လ 3, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
ICO ၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့မှာအရင်းအမြစ်များကိုအလားအလာရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲသို့ထည့်သွင်းရန်၊ ခိုင်မာသော blockchain ကွန်ယက်တည်ဆောက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုရန်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောတိုကင်များနှင့်ဒင်္ဂါးများကိုအလွယ်တကူရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် Cryptocurrency Exchange ကိုသင်သိသင့်သောအရာများ
ဇြန္လ 26, 2020 ဇြန္လ 1, 2021 Alonzo အညစျအကွေး	2 မှတ်ချက်
cryptocurrency သည်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုပုံစံတစ်ခုကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချမရသောအချိန်တွင် cryptocurrency ဖလှယ်မှုသည်အကျိုးအမြတ်ရှိသောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုတင်ပြသည်။ ၎င်းသည် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေး၏ဂန္ထဝင်အယူအဆအပြင် cryptocurrency မှတဆင့်ငွေရှာကူညီနိုင်သည်။
A cryptocurrency လဲလှယ် software ကို သင့်ရဲ့ cryptocurrency လဲလှယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်၏လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ကိရိယာတစ်ခုအနေနှင့်ရှိပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်ကြီးထွားစေရန်သေချာစေရန်အရန်တပ်ဆင်ထားသည့်အရာများစွာရှိသည်။
အိန္ဒိယသည်ပထမဆုံး Cryptocurrency Exchange ကိုစတင်ခဲ့သည်
ဇြန္လ 24, 2020 ဇြန္လ 23, 2020 Goefrey	မှတ်ချက် Leave
cryptocurrency တိုးတက်မှုသည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတွင်ကျယ်ပြန့်သည်။ ၁၅၀၀ ကျော် cryptocurrencies ကို Coinmarketcap တွင်စာရင်းသွင်းထားသော်လည်းတောက်ပမှုကိုလျှော့ချမထားပေ။ လုပ်ငန်းရှင်များကအသစ်တစ်ခုကိုစတင်နေကြသည် cryptocurrency လဲလှယ် script ကို နှင့် Crypto ၏လောကသို့ဝင်။
Coinswitch သည်ပထမဆုံး Cryptocurrency Exchange ကိုစတင်တော့မည်။ Coinswitch သည် INR အတွက်ဝယ်ယူလိုသော cryptocurrency ကိုပြောင်းလဲရန်ငွေပေးချေနိုင်ပြီးရွေးချယ်ထားသည့် cryptocurrency ပေါ်တွင်စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းပြောင်းလဲမှုကိုလန်းဆန်းစေသည်။
ဇြန္လ 18, 2020 ဇြန္လ 17, 2020 krish aaradhya	မှတ်ချက် Leave
အင်တာနက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုဆက်လက်လွှမ်းမိုးနေသဖြင့်အနာဂတ်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်မှုအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုနေရလိမ့်မည်။ ဤကြီးမားကျယ်ပြန့်သောပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကဏ္ aspects အားလုံးတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည် - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရက်ဆိုင်သည်ဒေသခံအရက်ဆိုင်ထက်အွန်လိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူစွာ၊ ကုမ္ပဏီများသည်ရုံးခန်းနေရာများတွင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောငှားရမ်းခများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကိုပေးဆောင်မည့်အစားဝေးလံခေါင်သီသောအလုပ်ခွင်ကိုတည်ထောင်ရန်တတ်နိုင်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် Cryptocurrency Exchange အတွက်စေ့စေ့စပ်စပ်လမ်းညွှန်!
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 17, 2020 ဇြန္လ 16, 2020 Mia Perla	3 မှတ်ချက်
cryptocurrencies အလွန်ပြင်းထန်သောမတည်ငြိမ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းကိုငွေပေးငွေယူ၏အဓိကကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ သို့သော်မတည်ငြိမ်မှုသည် crypto ဘုံမှ crypto ဖလှယ်မှုမှအမြတ်အစွန်းရရှိရန်နည်းလမ်းသစ်ကိုဖွင့်ပေးသည်။ ကုန်သည်များသည် crypto ဖလှယ်မှုမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိသော်လည်း 'အိမ်သည်အမြဲတမ်းအနိုင်ရသည်' ဟူသောအတွေးအခေါ်အားဖြင့်သွားသောအခါ cryptocurrency ဖလှယ်မှုသည်လဲလှယ်မှုပြုလုပ်သောငွေပေးငွေယူတိုင်းတွင်သေချာသည့်အမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်။
Leverage Exchanges မှတစ်ဆင့်အမြတ်ရရန်အခွင့်အလမ်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ လိုလားသည်။ လေ့လာပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 11, 2020 ဇြန္လ 9, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက Ethereum 2.0 နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားပြီးလောင်းကြေးလား သူတို့ကိုအမှန်တကယ်ဘာကလှုံ့ဆော်ပေးသနည်း။ အသေးစိတ်ကြည့်ရအောင်!
Ethereum blockchain analytics ကုမ္ပဏီမှပေးသောအချက်အလက်များအရအနည်းဆုံး ETH ၃၂ ခုပါဝင်သည့်ပိုက်ဆံအိတ်အရေအတွက်သည်အဓိကအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုကြေငြာပြီးနောက်တစ်နှစ်အတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၃% မြင့်တက်ခဲ့သည်။ 32 ETH ဆိုသည်မှာ ETH staking node ကို run ရန်သင်လိုအပ်သောတိုကင်အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ETH 13 နှင့်အတူ Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်အရေအတွက်ကို 32 နီးပါးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဇြန္လ 10, 2020 ဇြန္လ 9, 2020 krish aaradhya	1 မှတ်ချက်
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာအန္တရာယ်အကြီးမားဆုံးကအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်လည်းသင့်တော်သည်။ သင်အကျိုးအမြတ်ရရန်အခွင့်အလမ်းရှာနေသည်ဆိုပါကသင့်လျော်သောစွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာဖြင့်အန္တရာယ်များသောကုန်သွယ်မှုပြုခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ ဈေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်များစွာနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကြားခဲ့ကြရပြီး၎င်းသည်လည်းမှန်ကန်သည်။ သို့သော်, သြဇာနှင့်အတူ cryptocurrency ကုန်သွယ်များ၏အန္တရာယ်အစက်အပြောက်ကုန်သွယ်ထက်အများကြီးပိုအန္တရာယ်များသည်။ သင့်တွင်သင့်လျော်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုရှိပါကကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏အမြတ်အစွန်းကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဖြူရောင်တံဆိပ် Bitcoin Exchange Platform ကိုဖန်တီးပါ
မေလ 7, 2020 ဧပြီလ 12, 2021 ဂျူလီမစ်	3 မှတ်ချက်
Ferrari ဟာ supercars ကဲ့သို့ Bitcoin သည် cryptocurrency ကိုဆိုလိုသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုကြီးလာသည်အထိမည်သူကမျှခြုံငုံ။ မရဟူသောစကားလုံးတည်ရှိမှုကိုမသိခဲ့ကြပါ။ Bitcoin သည် cryptocurrency ကိုလူထုသို့ယူဆောင်လာရုံသာမကကမ္ဘာကြီးသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမျှော်လင့်နိုင်သည့်တော်လှန်ရေးဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ ဤအချိန်ကွာဟချက်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်မှုအတွက်များစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အသစ်တွေ့ရှိသည့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုနှင့် Bitcoin တန်ဖိုးနှင့်အတူစပ်စုပြီးစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် Bitcoin ဖလှယ်ခြင်းကိုစတင်လိုကြသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင်လိုအပ်သည့်အရာအတိအကျဖြစ်သည်
Cyberpol သည်သင်၏ Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည် - ၎င်းသည်အမည်မသိဖြစ်နေသေးသလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 4, 2020 မေလ 3, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တနင်္ဂနွေ, မေလ 3, ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ CYBERPOL Ricardo Baretzky ကယခုသူတို့သည် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်များအားလုံးကိုလက်လှမ်းမီနိုင်ပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ cryptocurrencies ကိုစိတ်ဝင်စားမှုသည်အဆတိုးများပြားလာပြီး Bitcoins အကြောင်းမကြားဖူးသူကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ ငွေသည်ကုန်စည်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ငွေစုခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်ညီမျှသည်။ ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ရူဘယ်စသည့်အစဉ်အလာရှိသောငွေကြေးများကို Fiat ငွေကြေးဟုခေါ်ပြီးနိုင်ငံ၏ဗဟိုဘဏ်များမှထုတ်ပေးသည်။ PayPal နှင့်အခြားသူများသည် Fiat ပိုက်ဆံဖြင့်လည်ပတ်ကြသည်။
Bitcoin စျေးနှုန်းကြောင့် Halving ဇာတ်လမ်းတွဲမှ $ 19,500 ကျော်လွန်ရန်မဖြစ်နိုင်စျေးနှုန်း
ဧပြီလ 30, 2020 ဧပြီလ 30, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
Crypto Pundits များက Bitcoin စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်၊ အထူးသဖြင့် BTC သည်မေလတွင်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သတ္ထုတူးဖော်ခြင်းဆု၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခြင်းကြောင့်ဒင်္ဂါးများ၏ရှားပါးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နောက်ဆက်တွဲရှားပါးမှုကြောင့် ၀ ယ်လိုအားတိုးလာသည်။
Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သည်ဘာကြောင့် Crypto Marketplace တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ Pl မှပါဝင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 14, 2020 ဧပြီလ 13, 2020 Akshara Singh က	မှတ်ချက် Leave
ပထမ ဦး ဆုံးဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအောင်မြင်မှုအပြီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံများကို cryptocurrencies တွင်စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကလူကြိုက်များ altcoins တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သည် အဖြူရောင်တံဆိပ် cryptocurrency လဲလှယ် ဆော့ဝဲ။ ဒီအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Bitcoin လဲလှယ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ သင်၏လဲလှယ်ရေးပလက်ဖောင်းစတင်ပြီးနောက်သင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်လိုအပ်သည်။
ခိုးယူသော Cryptocurrencies ၀ ယ်ခြင်းအတွက်အဖမ်းခံရသောဂျပန်အမျိုးသားနှစ် ဦး
မတ်လ 16, 2020 မေလ 1, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
ဟော့ကိုင်းဒိုးမှဆရာဝန်တစ် ဦး နှင့်အိုဆာကာအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိတ ဦး ဖြစ်သောဂျပန်အမျိုးသား ၂ ဦး အားနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Coincheck hack နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော NEM ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဒင်္ဂါးများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဒီဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်မကြုံစဖူးအရှုံးဟာဒေါ်လာ ၅၃၀ သန်းတန်ဖိုးရှိ cryptocurrencies ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ခိုးယူ Cryptocurrencies ဘယ်မှာသွားပါသလဲ?
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2020 Samuel Gush	1 မှတ်ချက်
အဓိက crypto အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းများကိုအခြားလတစ်လနီးပါးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးသိသိသာသာဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်အီတလီဒစ်ဂျစ်တယ်အကြွေစေ့လဲလှယ်ရေး Altsbit ကိုကြေငြာခဲ့သည် မေလက၎င်း၏ပိတ်သိမ်း။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် Bitcoin ၆.၉၀၀ ကျော်နှင့် Ethereum ဒင်္ဂါး ၂၀ ကျော်ခိုးယူခံခဲ့ရသည်။ cryptocurrencies မှဖော်ပြခဲ့သည့်အမည်ဝှက်မှုကသူတို့ကိုငွေကြေးခ ၀ ါချသူများနှင့်ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်စွဲဆောင်မှုနှင့်အာဏာပိုင်များအတွက်အဓိကအခက်အခဲဖြစ်စေသည်။
Altcoin ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ သင်၏ Cryptocurrency Business အတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Altcoin ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2020 Ronon Margo	မှတ်ချက် Leave
cryptocurrencies သည်မကြာသေးမီရက်များ၌လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှ Bitcoins အပြင် Ethereum, NEO, Litecoins, Dogecoins စသည့် Altcoins သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤသည် crypto နိူးအများစုသူတို့ရဲ့လိုချင်သော ဦး စားပေး၏မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် Altcoin ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်ကိုယ်ပိုင် Altcoin ကိုအခက်အခဲမရှိနည်းလမ်းဖြင့်ဖန်တီးနိုင်ပုံကိုဖော်ပြထားသည်။
Bitcoin သည် $ 10k Barrier ထက်ကျော်လွန်သည်။ အောက်တိုဘာလကတည်းကအမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြစ်သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
Bitcoin cryptocurrency သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလကတည်းက၎င်း၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကို။ သတင်းရင်းမြစ်များက Bitcoin သည်ယမန်နှစ်ကဒေါ်လာ ၂ သောင်းသို့ရောက်ရှိရန် ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်တွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ Bitcoin လူဇင်ဘတ်အခြေစိုက် cryptocurrency trading platform (Bitstamp) ၏အဆိုအရသောကြာနေ့ (EST) သည်နယူးယောက်မြို့၌ ၁၂း၀၀ နာရီတွင်ဒေါ်လာ ၉၈၆၃ သို့ရောက်ရှိရန် ၁.၂% မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ဘဏ္Freedomာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောကတိတစ်ခုဖြင့် Crypto ဒက်ဘစ်ကတ် Generation Z
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2020 သောမတ်စ် Glare	မှတ်ချက် Leave
မျက်မှောက်ခေတ်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များသည်ဗွီဒီယိုဝေမျှခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမှသတင်းများရကြပြီးလူမှုရေးကွန်ရက်များမှအတွေးများကိုဝေမျှကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရသူတို့အများစုတွင်စမတ်ဖုန်းများရှိပြီးဂိမ်းကစားခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်သူတို့ကြိုက်သည့်အခြားအရာများကိုနေ့စဉ်ပျော်မွေ့ခြင်းစသည်တို့အတွက် ၄ နာရီကျော်အချိန်ယူကြသည်။ သူတို့ဟာစက္ကူပိုက်ဆံနဲ့တူတဲ့အရာ ၀ တ္ထုတွေကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေလိုတယ်၊ ဒါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Bitsa လို့ခေါ်တဲ့ cryptocurrency platform BCH (bitcoin cash)၊ ZEC, DASH, XRP, LTC နှင့် BTC တို့လိုငွေဖြည့်ကတ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ Bitsa Young သည် Visa ဖြစ်သော်လည်းရိုးရာဘဏ်အကောင့်နှင့်မချိတ်ဆက်ပါ။ အဲဒီအစားသူကအမိန့်ထုတ်ပြီး load လုပ်တယ် မိုဘိုင်း application ကို.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2020 Ronon Margo	မှတ်ချက် Leave
Security Token Offering သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်များလာသည့် Crowdfunding ၏ဒုတိယလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးအတွက်မှန်ကန်သောရန်ပုံငွေများနှင့်အမြတ်အစွန်းများရရှိစေရန်သက်သေပြနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် Security Token Offerings များသည်နိုင်ငံအသီးသီးအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ spam ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန် Security Token Offering သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူပေါ်လာသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးတိုကင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစတင်ခြင်းနှင့်စတင်ရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကဤဘလော့ဂ်သည် crypto စျေးကွက်ရှိထိပ်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးသူ ၅ ဦး နှင့်အတူသင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Google က Play Store မှ Bitcoin ဂိမ်းကိုပိတ်ပင်လိုက်သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
Google Play စတိုးသည်သုံးစွဲသူများအား Bitcoin (BTC) သို့ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့်ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးသည်ဖယ်ရှားရေးအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်များပေးရန်မရှိသေးပါ။ နောက်ဆုံးအပြောင်းအရွေ့သည် cryptocurrency လုပ်ငန်းကိုဂူဂဲလ်၏ဆင်ဆာလုပ်ခြင်း၏တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်။
အမေရိကန်သမ္မတလောင်းအင်ဒရူးယန်းသည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2020 Nelgzmatic Otty	မှတ်ချက် Leave
အင်ဒရူးယန်သည်ရှေ့နေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်ပရဟိတအလှူရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုမှာ အင်တာဗျူး နှင့် ဘလွန်းဘာ့ဂ် နိုင်ငံရေးပြissuesနာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်သူသည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သင့်လျော်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်စံနှင့်ညီညွတ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။